Abasebenzi beMagazini yaseNew York bayamanyana - Ezopolitiko
Abasebenzi beMagazini yaseNew York bayamanyana
Abasebenzi kwimagazini yaseNew York ngolwe-Lwesithathu ekuseni bacele abaphathi ukuba bavume ngokuzithandela umanyano lwabahleli, baba yinkampani yemithombo yeendaba yakutsha nje ukutyhala iingxoxo ezidityanisiweyo kwimekobume yoshishino eyandayo.
Abaququzeleli bathi malunga ne-80% yabasebenzi abakwi-160 abafanelekileyo abahleli batyikitye amakhadi emibutho ebonisa inkxaso yabo. Iqela leengxoxo lenziwe ngabasebenzi bokushicilela kunye nabasebenzi bedijithali, kubandakanywa ababhali, abahleli, abavelisi, abahleli beekopi, abahloli benyaniso, kunye nabanye abangabaphathi kwiphephancwadi kunye neengqinisiso zayo zedijithali - i-Cut, Vulture, Intelligencer, Grub Street, kunye ne-Strategist. .
Iphephancwadi laseNew York lijoyina uluhlu olukhulayo lwemigudu yokulungelelanisa kwishishini leendaba zedijithali kwiminyaka yamuva, kwiindawo ezifana neGizmodo Media Group, i-Vice, i-Guardian, i-HuffPost, i-New Yorker, i-Vox Media, kunye nabanye. Kule veki, ababhali kunye nabahleli kwiSlate ivotele ukugunyazisa ugwayimbo olunokubakho phakathi kothethathethwano phakathi kwabasebenzi bomhleli kunye nabaphathi. (Abasebenzi kwiiNdaba zeBuzzFeed abadibananga, kwaye i-CEO yeBuzzFeed uJonah Peretti unayo iminyaka waxoxa ukuba umanyano ayilunganga kubasebenzi beBuzzFeed.)
Inzame yomanyano yemagazini yaseNew York, eququzelelwe ngeNewsGuild yaseNew York, iza njengenkampani yabazali bemagazini, iNew York Media, iphonononga intengiso enokwenzeka , iWall Street Journal yabika ngo-Agasti. Eli phephancwadi lithengwe nge-55 yezigidi zeedola kwi-2003 ngu-investment banker uBruce Wasserstein, owafa ngo-2009. Intombi yakhe, uPam Wasserstein, ngoku i-CEO yeNew York Media.
iglasi yemifuno ethe nkqo ngaphakathi
Abaququzeleli bemagazini yaseNew York bathi bafuna imivuzo engcono, abathi ayilingani kwaye ingaphantsi komgangatho weshishini kwezinye iindima. Bakwafuna ukucaca ngakumbi malunga neendima zemisebenzi kunye noxanduva, ukhathalelo lwempilo olungcono kunye nezibonelelo zomhlalaphantsi, kunye nokwahluka kwamagumbi eendaba.
Inyani yokuba ishishini ngokwalo libuyela umva kwiingxoxo ezidityanisiweyo kuyandivuyisa, utshilo uRebecca Traister, umbhali-mkhulu kwimagazini yaseNew York kunye neSika. Yiloo nto eyenza uzinzo ngakumbi kunye nokhuseleko kubasebenzi.
Kwi-imeyile eya kubasebenzi ngoLwesithathu emva kwemini, umhleli wemagazini yaseNew York u-Adam Moss uthe, 'Siceba ukusebenzisana nomanyano kwaye sinethemba lokuba sinokufikelela ekuqaphelisweni ngokuzithandela kungekudala.'
igolide yekrisimesi ebomvu ebomvu
Imagazini yaseNew York ibe yinto yebali eliyimpumelelo kumajelo oshicilelo emveli enkosi kugxininiso lwedijithali oluye lwabonakala luyikhusela kobunye ubunzima obujongene nezinye izihloko zoshicilelo kwiminyaka yakutshanje. Ushicilelo lwale magazini luye lwatshintsha ukusuka veki nganye ukuya kuzo zonke ezinye iiveki ngo-2014.
Njengamajelo eendaba amaninzi, kuquka Iindaba zeBuzzFeed, imagazini yaseNew York isandula ukutyhalela kwimithombo emitsha yengeniso njengoko ishishini elibanzi lisilwa Konke okubandakanya intengiso yentengiso yolawulo lukaFacebook noGoogle . NgoNovemba, iNew York Media yabhengeza iziko le paywall kwisuti yayo ethe nkqo.
Iingxoxo zokuququzelela iManyano zaqala ngaphezu konyaka odlulileyo, abaququzeleli bathi, ngaphambi kokuba i-paywall kunye namahemuhemu okuthengisa. Kodwa iingxoxo ziye zathatha umphunga ehlotyeni nasekwindla, nabaququzeleli beqonda ukuba imanyano inokunceda igumbi leendaba libe nesihlalo etafileni ukuba ubunini obutsha bubangela isiphithiphithi sangaphakathi okanye ukudilizwa. ukukhula kwenyani kumagumbi eendaba edijithali .
Ngokuqhelekileyo, kubonisa ukuba le shishini apho into inokutshintsha ubusuku bonke, kusho uNate Jones, umbhali wabasebenzi kwi-Vulture, indawo yokuzonwabisa yemagazini yaseNew York. Ujonge zonke ezinye iindawo ezithengisayo, kwaye bavuka ngenye intsasa kwaye oko babecinga ukuba yinyani ngoku kuphelile ngokupheleleyo.
Akukacaci ukuba bangakanani na abasebenzi abachasayo kwiNew York Media abanokujongana nangaphakathi - okanye ngaba abaphathi banokufuna ukuyikhupha inkqubo ngelixa bejonga iinketho zokuthengisa.
Inkampani ibonakala ilindele umzamo. I-Splinter ingxelo ngoSeptemba ukuba iphephancwadi lalibambe intlanganiso yomanyano-busting kubaphathi abaphezulu, apho isithethi inkampani wachaza ngelo xesha njengeseshoni yoqeqesho kubaphathi malunga nendlela umthetho wabasebenzi usebenza, kwaye yintoni iingxoxo ivumela kwaye imiqathango phakathi kwabaphathi kunye nabasebenzi kufuneka kwixesha elizayo. iinzame ziza kwiNew York Media.
Ndinesizathu esivakalayo sokulindela ukuba oku kuya kubuliswa ngokufudumeleyo, kwaye ndingakothuka kakhulu ukuba bekungenjalo, utshilo uTraister.
Apha ngezantsi sisitetimenti sombutho womanyano, esithunyelwe kubaphathi kusasa ngoLwesithathu:
izimvo ezincinci ezisesikweni zokuhlala
INew York Magazine liziko leSixeko saseNew York kunye nelizwi elibalulekileyo kubuntatheli baseMelika. Thina, basebenzi bokuhlela, sinebhongo ngokusebenza kolu papasho lubaluleke kangaka, kwaye sifuna ukuqinisekisa ukuba iNew York Media iyaqhubeka nokugqwesa ngelixa sixabisa igalelo labo bonke abasebenzi bayo kwiminyaka ezayo.
I Inew york uphawu lwakhelwe phezu komsebenzi onzima wabahleli, ababhali, abakhangeli benyani, abahleli beekopi, abahleli beefoto, abaqulunqi, abavelisi kunye nabahleli bemidiya yoluntu. Nokuba malunga nenkcubeko, ezopolitiko, ifashoni, okanye ukutya, ingxelo yethu ihlala ilumkile kwaye ibandakanya kwaye ayoyiki ukubuza amandla. Njengoko inkampani ikhula, sikholelwa ukuba indawo yethu yokusebenza kufuneka ibandakanye ezo mpawu.
Okwangoku, abasebenzi bomhleli bahlala benyanzelekile ukuba bakhethe phakathi kokuqhubeka nomsebenzi abawuthandayo Inew york kunye nokufumana umsebenzi ohlawulekayo ngakumbi kwenye indawo. Kangangeminyaka, abanye abasebenzi bebehlawulwa ngaphantsi kwemigangatho yemidiya. Izibonelelo zihlala zitshintsha kwaye azihlangabezani neemfuno zethu zokwenyani. Imivuzo yohluka kakhulu phakathi kwabantu abanezikhundla ezifanayo, kwaye uphuhliso lwekhondo lomsebenzi alukho okanye alunelanga. Kuyo yonke ibhodi, abasebenzi bayazi ukuba elona thuba lilungileyo lokufumana ukonyuswa okanye ukunyuselwa kukufumana umsebenzi kwenye indawo. Konke oku kwandisa kuphela ukunqongophala kweyantlukwano esele ikhathaza kwigumbi lethu leNdaba.
ubopha njani imaski yedayi
Ukuqiniseka kweshishini lethu kwaziwa kakuhle, kwaye ukhuseleko lwemisebenzi luhlala luyingxaki. Sonke siziva sinebhongo elikhulu kunye notyalo-mali kwizikhundla zethu apha. Kodwa ke, ikratshi nobungangamsha azizinzi uzinzo ngokwazo. Nathi siyayifuna loo nto.
Ukukhusela amalungelo ethu njengabasebenzi kunye nokugcina ilizwi lemagazini kwixesha elizayo, siye sagqiba ekubeni senze imanyano kunye ne-NewsGuild, emele oontanga bethu kwiindawo ezivelisa ezinye zezona ntatheli zibalulekileyo nezibalulekileyo namhlanje, njengeNew York. Amaxesha , iWashington Thumela , i-Associated Press, kunye Isizwe - kunye nokubandakanya ushicilelo olutsha olutsha olufana Umhlali waseNew York, ilos Angeles Amaxesha , eChicago Tribune , kwaye IRiphabhlikhi eNtsha .
Sikholelwa ukuba umanyano yeyona ndlela ilungileyo yokujongana nezikhalazo zethu emsebenzini kwaye usivumele ukuba siqhubeleke nokupapasha amabali anyanisekileyo, akhohlakeleyo, nakhethekileyo njengesi sixeko. Siyathemba ukuba iNew York Media iya kuqaphela umanyano lwethu ukuze siqalise inkqubo yothethathethwano emanyeneyo kwaye sakhe inkampani eyomeleleyo, enobulungisa ngakumbi eminye iminyaka engama-50.
izityalo ezikunceda ulale
unyango lwembono yeefestile imifanekiso
Ikhitshi lidlula kwiifestile
Izicwangciso zoyilo lwasekhaya